टिकटकबाट कस्तो खतरा छ ?
माघ २६, काठमाडाैं । हाल भिडियो शेयरिङ एप, टिकटकका ५० करोड भन्दा धेरै एक्टिभ प्रयोगकर्ता छन् जसमा पनि २० वर्ष र सो भन्दा कम उमेरका युवाहरुमाझ यो अत्याधिक लोकप्रिय मानिन्छ । तर कतिपय राजनीतिज्ञहरुले चिनियाँ कम्पनीको भएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
चीनको कानुनमा प्राविधिक तर्फका निजी फर्महरुले सम्पूर्ण जानकारीहरु सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । यसकारण पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा हुन सक्ने हुँदा पछिल्लो समय टिकटक विवादमा परेको हो । यहाँसम्मकी यसका निरीक्षकहरु समेत आफ्नो सुरक्षाका बारेमा चिन्तित छन् । यस्तोमा टिकटक वास्तवमै सुरक्षित भए नभएको र यसमा विश्वास गर्न सकिने सम्बन्धी अझै केही टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
बेइजिङमा अवस्थित बाइटडान्स कम्पनी थुप्रैपटक विवादमा आइसकेको छ । गत वर्ष मात्र टिकटक केही समयका लागि भारतमा प्रतिबन्धित भएको थियो । टिकटकमा भिडियो एडिट गर्ने विभिन्न फिचर हुन्छन् जसले गीत गाउने, नाच्ने, अभिनय गर्नेदेखि सबै क्रियाकलपाका लागि राम्रो प्लेटफर्म प्रदान गरिरहेको छ ।
त्यस्तै यसको ‘अटोप्ले’ मोडका कारण एउटा भिडियो सकिनासाथ तुरुन्तै अर्को सुरु हुनेहुँदा यसले मान्छेको समय बितेको पत्तै हुँदैन । यस्ता कारणले पनि टिकटकप्रतिको आकर्षण झन बढ्ने क्रममा रहेको छ । तर केही समय अगाडि मात्र अमेरिकी काउन्टर–इन्टेलिजेन्सले यसमाथि अनुसन्धान गर्दा कम उमेरका प्रयोगकताले अनुपयुक्त सामग्री हेरेको र व्यक्तिगत जानकारी लिक भइरहेको पाइएपछि टिकटकलाई ४३ लाख पाउन्ड जरिवाना सुनाइएको थियो ।
अमेरिकामा भने टिकटकले प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत डाटा दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्बन्धी चिन्ता रहेको छ । फेसबुकका पूर्व सुरक्षा प्रमुख एलेक्स स्टेमसले यसअघि बाइटडान्सका अमेरिकी र चिनियाँ कर्मचारीबीच विवाद भएको ट्वीट गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै चिनियाँ सरकारले आफ्नो देशका सामाजिक संजाल एपहरु मार्फत प्रयोगकर्ताबारे अवैध रुपमा जानकारी संकलन गर्ने गरेको आरोप पनि लगाइँदै आएको छ । तर बाइटडान्सले भने अन्य मुलुकका प्रयोगकर्ताका डाटा छुट्टै स्टोर गरिएको र चिनियाँ अधिकारीहरुसँग कहिल्यै शेयर नगरिने स्पष्ट पारिरहेको छ ।
अघिल्लो हप्ता मात्र अमेरिकी नेताहरुले टिकटकलाई संसदमा स्पष्टिकरणका लागि निम्ता गरेका थिए । कतिपय सिनेटहरुले त यसबारे अमेरिकी सरकार आफैँ अघि सरेर अनुसन्धान गर्न पनि भनेका छन् । किनकी टिकटक विदेशी चुनावलाई प्रभाव पार्नका लागि पनि लक्षित हुन सक्नेप्रीत चेतावनी दिइएको छ ।
तर बाइटडान्सले भने आफूहरुले टिकटकमा राजनीतिक विज्ञापन कहिल्यै नदेखाइने बताएको हो । यस्तोमा कम्पनीले २०१९ मा आफ्ना नीति धेरै परिवर्तन गराइसकेको र आगामी दिनहरुमा पनि प्रयोगकर्ताको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तोमा अब टिकटक अमेरिकामा निषेध हुने सम्भावना रहेकाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ जहाँ मासिक २ करोड ६५ लाख प्रयोगकर्ता छन् ।
हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् नत्र ज्यान जान सक्छ
मंगल ग्रहमा किन पुग्न सकेनन् मानिस ? यस्ता छन् कारण
सल्यानकाे थारमारेमा पुस १० र ११ गते बाइक र स्कूटर एक्सचेञ्ज अफरकाे सुचना…
१७ अर्ब डलर बढ्यो मुकेश अम्बानीको सम्पत्ति